जाग नेपालीहरु हो..., जाग! डा.... :: ज्योति देवकोटा :: Setopati
जाग नेपालीहरु हो..., जाग! डा. केसीको सत्याग्रहमा जाग
देवराज न्यौपाने अमेरिका
डा केसी, महामहिम पराजुली र वेटिंग प्राइमिनिस्टर ओली अहिले सर्वाधिक चर्चामा छन् । यिनको चर्चाले खास चर्चा पाउनुपर्ने र पाइरहेका देउवा (लेउवा या दिन नजान्ने) को चर्चालाई समेत छायाँमा परेको छ । ओली प्राय सधैँ नैं कुनैं न कुनैं हिसाबले चर्चा मैं रहँदै आएका छन् चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक । उनको ९ महिने प्रधानमन्त्री कालमा राष्ट्रियताको सवालमा उनले लिएको अडान तथा खेलेको भूमिका साथै विकाशका नाराका कारण उनको चर्चा र लोकपृयता शिखरमा पुग्यो जसले गर्दा एमाले भित्रको गुटबन्दीको समस्या र अन्य कमी कमजोरीहरू छायाँमा परे र राम्र्रै चुनावी सफलता पनि हात लाग्यो । उनको हलुका ठट्यौलो र विरोधी प्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने शैलीले खास बेला फाइदा गरे पनि प्राय उनलाई नराम्रोसित अनावश्यक विवादमा तानेको छ । उधारणका लागि यी २ घटानाहरुलाई हेर्न सकिन्छ । पहिलो । महाकाली शन्धी देउवा सरकारले गर्यो , ओलीजी प्रतिपक्षी दलको फस्र्ट म्यान पनि थिएनन् तर खरब र अरब नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्दै शन्धीको विपक्षीमा उभिएकाहरुका प्रति कटाक्ष गर्दै अत्यन्त छुचो रूपमा खडा भए जसको दुस्परिणाम एमाले पार्टीले विभाजन नैं ब्यहोर्नुप¥यो र अहिले पनि महाकाली शन्धीको कुरा उठ्ने बित्तिकै प्रश्न देउवातिर भन्दा ओलीतिरै तेर्सिने गर्दछ ।
दोस्रो कुरा । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धिकरणको लागि या भनौँ विसंगतिका विरुद्ध लामो समयदेखि पटक पटक अनसन बस्दै र सरकारले सम्झौता गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरे पछि त्यसैलाई पुनरावृत्ति दिँदै आउनुभएका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीका विरुद्ध चुनाव जित्ने दलका प्रमुख नेता वेटिङ्ग प्राइमिनिस्टर, सरकारी कोष खर्च गरेर आफ्नो औषधी उपचारका लागि बैंकक उड्नु अघि पत्रकारहरू समक्ष डा केसी प्रति हलुका टिका टिप्पणी खिसीटिउरी गरेपछि अन्य नेताहरूका पनि केसीलाई मर्न दिनपर्छ जस्ता अभिब्यक्तिहरुको पृष्ठभूमिमा केसीका समर्थकहरूलाई आगोमा घिउ थपे झैँ भएको छ र आन्दोलनकारीहरुको मुख्य निशाना ओली बन्न पुगेका छन् जबकि न ओली केसीलाई गिरफ्तार गराउने न माग पुरा गरिदिनु पर्ने ओहदामा अहिले भएको मान्छे ? नेपालमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जालोसँग जोडिएका सवालहरूमा डा. केसीको यो अभियानले जनतालाई जागरुक र आन्दोलित गर्दै लगे सँगसँगै ओलीजीहरुका यस्ता रवैयाहरूका कारण एमाले पार्टीकै छविलाई धुमिल बनाउने खतरा सिर्जना भएको देखिन्छ । यद्दपी यस्तो राष्ट्रको अहम् महत्वको सवालमा जसले उठाए पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समाधानको दिशामा जिम्मेवार शक्तिहरू एकजुट हुनु पर्ने थियो । जनताकोे जीवनसँग जोडिएका यस्ता विषयहरूमा समेत विवाद र अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजिनु ज्यादै नैं दुखद कुरा हो ।
शिक्षामा भएको ब्यापारिकरण र भ्रष्टिकरणका विरुद्धको आन्दोलनमा मैंले पनि २ दशक बिताएको छु एउटा सक्रिय कार्यकर्ता या नेतृत्वदायी भूमिकामा । यसका लागि हजारौँ जुलुस, नाराबाजी, आन्लोन, तोडफोड, पुलिसका लाठी, ढुंगामुडा, अश्रु ग्यास, कस्टडीहरु मैंले पनि भोगेर जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण उर्वर युवा उमेर खर्चिएकोछु । हामी हरेक ससाना इस्युहरुमा तुरुन्तै सडकमा उत्रन्थ्यौं । यसैले विद्यार्थी शक्तिको पहिचान बनाएको थियो । आज प्रवासबाट यी कुराहरू सम्झाउन र कोट्याउन विल्कुलै मन थिएन । तर अहिले फर्केर हेर्न विवश छु कि के त्यतिखेर नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै हामी विद्यार्थीहरूलाई झुटा नारामा बहकाएर युज मात्रै गरेका थिए?? हाम्रो पढाइ बिग्रियो । किताब, कलम र कक्षा छाडेर बारहरू भत्काउन, टायर बाल्न र कसैलाई कालो मोसो र जुताको माला लाउन गयो के आज यही दिन देख्नलाई थियो ?? यसको जवाफ चाहियो! यसको मूल्य कसले तिर्ने?? हैनभने यही कुरा ९भहबअतथि कबmभ तजष्लन० डा केसीले उठाउँदा किन विरोध हो? केसीको पक्षमा आर्थात आफैँले भन्दै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिको पक्षमा किन अखिल र नेविसंघ सडकमा नउत्रिएका ? किन एउटा वक्तव्य पनि ननिकाली कानमा तेल हालेर बसेका ?? कि अव विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चासोका विषय बन्न छाडेका हुन्? कम्तीमा आफ्नो धारणा त आउनु प¥यो? डा. केसी गलतै छन् भने पनि उनको विरुद्धमा खडा भए भो नि! कि त्यति हिम्मत पनि छैन??
महामहिम पराजुली एक भ्रष्ट व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा अव विभिन्न तथ्यहरूले सबैका सामु घाम जतिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ र डा केसीलाई हाल्न खोजेको खाल्डोमा आफैँ छानबिनमा तानिएर फसेका छन् उनी, म यसमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न । आशा गरौँ अदालतले न्याय गर्नेछ र आफ्नो गरिमा बचाउनेछ । कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन, उच्च ओहदामा बसेर मर्यादा मिच्ने, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीलाई उचित सजाय हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध गर्नेछ अदालतले । बरु म डा केसीका बारेमा आफ्ना केही विचार धारणाहरू राख्न चाहन्छु । उनका आलोचकहरुले खास गरी निम्न तर्कहरू राखेको पाइयो । (१) भोक हडताल (सत्याग्रह) आन्दोलनको तरिका या समाधानको उपाय हैन । को हो त्यो डा केसी र उसले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्ने? (२) माफिया, भ्रष्ट र फटाहाहरु द्वारा उनी परिचालित छन् । र उनी पुर्वाग्रही छन् । (३) अनावश्यक देवत्वकरण गरिदैछ । म यसमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु ।
यी ४ वटा मूल कुराहरूलाई विचार गर्दा कुनैं तर्कमा पनि कुनैं दम छैन । किनभने गान्धीले पनि सत्याग्रह गर्दा यो गरौँ कि नगारौं भनेर कुनैं बुज्रुकलाई सोध्न गएका थिएनन् न झापा विद्रोह, प्लेन हाइज्याक, सशस्त्र जनयुद्धहरू र बन्द हडतालहरू जनतालाई सोधेर, नियम, कानुन र सामाजिक मर्यादालाई ख्यालमा राखेर गरिएका थिए । माथिका सबै कुराहरू उनले उठाएका मुद्दा र आशयलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्नका कुतर्कहरु मात्र हुन् भन्न कुनंै जोखाना हेरिरहन पर्दैन । उनी चिकित्सा क्षेत्रका विसंगतिहरुको अन्त्य गर्न एक्लै संस्था जस्तो भएर लडिरहेका छन् । किनकि उनलाई लाग्यो कि यसलाई कोही पनि जिम्मेवार निकाय, सङ्घसंस्था र समुदायले उचित ध्यान दिइराखेको छैन । उनी चिकित्सा क्षेत्र भद्रगोल भयो, राम्रा विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, बिरामीले उचित उपचार पाएनन्, नाफाका लागि यो क्षेत्र भ्रष्ट भयो, माफियातन्त्रले जाँगिसक्यो, राजनीतिक नेता र दलहरू पनि यही दलदलमा फसिसके, अव त अति भयो भनेर यसलाई कानुन, विधि र प्रक्रिया भित्र ल्याउन तथा न्यायसंगत बनाउन नैं उनले यो जोखिम कदम उठाउनु परेको हो ।
कुनैं पनि आन्दोलनले मात्र लक्ष र उद्देश्यलाई हेरेको हुन्छ जसकालागि सकेसम्म कानुनी र शान्तिपूर्ण बाटो अपनाइन्छ । तर बाध्यता या आवश्यक परे कानुन तोड्ने र हतियार उठाउने जोखिम पनि लिनु परेको कुरा हामी इतिहासदेखि हेर्न सक्छौँ । आन्दोलनका नाममा गरिएका यिनैं नेताहरूका सबै कर्म कुकर्महरुलाई हामी जनताले आँखा चिम्लेर जायज मानिदिनु परेको छैन र? अनि यिनले यस्ता पवित्र भावना र त्यागका प्रतिमुर्ती, यत्रो राष्ट्रिय समस्यामा नमर्दा लम्पसारबादी भ्रष्ट नेता र सङ्गठनहरूलाई झकझक्याउन एक्लै जोखिम उठाउने महान् जनताका सपुतलाई नानाथरी लाञ्छना लाउन र षडयन्त्र गर्न पाइन्छ? जनता सधैँ यो सब टुलुटुलु हेरेर बसिरहन्छन्?
जहाँसम्म उहाँलाई अनावश्यक देवत्वकरण गरिदैछ भन्ने केही मानिसहरूले ठुलै चिन्ता लिनुभएको छ यसमा अलिकता कुरा गरौँ । धार्मिक प्रवृत्तिका मानिसहरू के विश्वास गर्छन् भने पृथ्वी लोकमा जब जब पापले पराकाष्ठा नाघ्दछ तब पाप र दैत्यहरूको नाश गर्न भगवान्ले मान्छेको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ । कसैको धेरै प्रशंसा, तारिफ या गुणगान गाउनुलाई देवत्वकरण भन्न खोजिएको हो भने आफूलाई राम्रो लागेको कुराको तारिफ या राम्रा मान्छेको प्रशंसा गर्न नपाइने हो र? कसैले ओलीको, कसैले प्रचण्डको त कसैले देउवाको पनि नचाहँदो गुणगान र चाप्लुसी गर्नु हुन्छ भन्ने आरोप पनि त छ नि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो निष्ठाका लागि बलिवेदीमा होमिन पनि तयार, निस्स्वार्थ र त्यागी जिसस क्राइष्ट र बुद्ध जस्ता मानिसहरूलाई नैं देवत्वकरण गरिएको थियो भन्ने मेरो विश्वास छ र मेरो बिचारमा कसैले डा. केसीलाई भगवान्कै रूपमा देख्ने स्थिति भोलि आएछ भने पनि उसको संविधानप्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा भयो ।
सामान्य चेकअप गर्न ठमठमी हिँडेर अस्पताल गएको एउटा सद्दे मान्छे जिउँदो फर्केर आउँछ आउँदैन शङ्का उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । हस्पिटलमा अयोग्य र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार अपराधी स्वास्थ्यकर्मीहरूका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदै जानु, अदालतले न्याय दिन सक्दैन भनेर यसले पनि जनताको विश्वास गुमाउँदै जानु र शिक्षा क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र लगायत हरेक क्षेत्र भ्रष्टिकरण हुँदै जानु यो लोकतन्त्रमा कत्रो चुनौती हो? नेपालका समाचारहरू पढेर यहाँ हामीालाई निन्द्रा लाग्दैन तर त्यहाँ अपराधी र पीडित दुवै पक्षलाई सामान्य झैँ लाग्न थालिसक्यो । उनीहरू बानी परिसके । पिडकहरु लुट्न पाउने उनीहरूको अधिकार झैँ गर्छन् भने पिडितहरु यस्तै हो के गर्ने भनेर पिडा खप्न बानी परिसके । बिचराहरूको अरू केही उपाय पनि त छैन । तर बोल्न र लेख्न सक्नेहरू अब चुप बस्ने अवस्था छैन ।
डा केसी कुनैं भगवान् हैनन् तपाईँ हामी जस्तै सामान्य मानिस हुन्, एक सचेत नागरिक । अव तपाईँ पनि ब्युझिनुस् । नेता र पार्टीका कुरा नसुन्नुस् बरु आफ्नैं आत्मालाई सोध्नुस् । ३० बर्से पंचायती व्यवस्था फ्यालेर प्रजातन्त्र ल्याएको पनि अर्को ३० वर्ष हुनलागिसक्यो । अझै यिनकै मात्र भर परे अर्को ३० वर्ष यसै गरी सजिलै हामीलाई झुक्याएर खान्छन् । भ्रष्ट नेताहरूका प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताका नाराहरू सब खोक्रा हुन् । अव यिनलाई कुरामा हैन व्यवहारमा जाँचौं । यी नेता र पार्टीहरूको विकल्प पनि छैन । तर यिनका दास भएर हैन अव आफू मालिक भएर यिनलाई काममा लगाउनुस् जनता । यिनको धेरै सुनियो अव यिनले तपाईँहरूको सुन्नुपर्छ ! डा केसीका विरोधीहरूले पनि ख्याल राख, समस्याको समाधान डा केसीको विरोध गरेर, जेल हालेर या मर्न दिएर हैन उनले उठाएका जनताका ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान गरेर मात्र सम्भव छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २, २०७४, ०४:११:२२